Save the Children” Toddobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka yartahay ayaa la guursadaa”. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Save the Children” Toddobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka...
Save the Children” Toddobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka yartahay ayaa la guursadaa”.
Dalka Hindiya waxa uu ka mid yahay dalalka carruurta ugu badan ee aan qaan gaarka aheyn la guursado, waxaa sidaa lagu sheegay warbixin ay soo bandhigtay hay’adda Save the Chuldren. Warbixintan ayaa intaas ku dareysa in toddobadii ilbiriqsiba hal gabar oo da’deeda 15 jir ka yartahay loo guuriyo.
Warbixintan ayaa tibaaxaysa in dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Yemen, Hindiya iyo Soomaaliya ay gabdhaha 10ka sano ka yar lagu khasbo rag ka da’ weyn taasoo noloshooda oo idil saameyn ku reebta.
Dagaalka, saboolnimada, iyo dhibaatooyinka bani’aadanimo ayaa loo arkaa in dhibaatada ugu weyn ee dalalkaasi ka jira ay yihiin kuwaas oo sababa guursiga gabdhaha yaryarka ah.
“Carruurta oo la guursado iyaga oo aan gaarin waxay gabdhaha ka qaadaysaa xuquuqda aasaasiga ah sida waxbarashada, horumarka iyo carruurnimadaba.” Sidaa waxaa yiri Helle Thorning-Schmidt oo ah Agaasimaha Guud ee hay’adda Save the Children.
Gabdhaha yaraanta lagu guursado waxa marar badan dhacdo in aysan waxbarasha helin, waxa ayna u badan tahay in ay la kulmaan rabshadaha qoyska ka dhex dhaca, xadgudub, iyo kufsi. Uur ayay qaadaan waxaana ku dhaca cudurrada galmada laga qaado oo HIV-ga ka mid yahay.
Warbixinta oo cinwaan looga dhigay ‘Dalalka ugu dhibka badan oo gabar ay ku noolaato’ ayaa waxa lagu eegay dhinacyada waxbarashada, gabdhaha aan gaarin guurka oo la guursado, gabdhaha da’ada yar ee uurka qaado, dhimashada foosha iyo tirada haweenka ee baarlamaanka ku jira.
Dalalka Jaad, Niger, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Maali iyo Soomaaliya ayaa ku jira kaalimaha ugu hooseeya ee warbixinta. Warbixinta Save the Children ayaa lagu soo beegay maanta oo ah maalinta caalamiga ah ee gabdhaha.
Previous articleMadaxweynaha oo wakiilada beesha caalamka uga warbixiyay hannaanka doorashada dalka.
Next articleGirl under 15 married every seven seconds, says Save the Children.